सेक्सको बारेमा चार चीज पत्ता लगाउनुहोस्! - Mitho Khabar
March 29, 2020 mithokhabarLeaveaComment on सेक्सको बारेमा चार चीज पत्ता लगाउनुहोस्!
यौन सम्बन्ध सुधार गर्न को लागी कुञ्जी हो, तर केहि सेक्स को दौरान दुखाई महसुस। एउटा अनुसन्धानका अनुसार डरले सेक्सको समयमा अधिक दुखाइ ल्याउँछ। प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक १० मध्ये एक महिलाले सेक्सको समयमा दुखाइ अनुभव गर्दछन्।
यदि तपाईं सेक्सको अनुभव गर्न लाग्नु भएको छ भने, यहाँ चार चीजहरू तपाईंले जान्नु आवश्यक छ।
दुई जना पार्टनरहरूको फरक इच्छा छ भने सेक्स दुखाइलाग्दो हुन सक्छ। किनकि दुबै चाहना एकै किसिमको नहुन सक्छ। यस बिन्दुमा दुबै पुरुषले यौनबारे खुला कुरा गर्नु आवश्यक छ। एडी मोरिसका अनुसार भावनात्मक सम्बन्धले सेक्सलाई सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ। उनी तर्क गर्छिन् कि यसले यौन जीवनलाई गहन बनाउँदछ।
गर्भ निरोधको बारेमा छलफल:
युवाहरू बीचमा बमहरू पनि प्रमुख चिन्ताको विषय हुन्, ती गर्भवती छन् वा हुँदैनन्। युवतीहरू यस कुरामा बढी गम्भीर बन्छन्। यो तपाइँको पार्टनर संग यसको बारेमा कुरा गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यौन सम्पर्कको बखत लिन सकिने सावधानीहरूको बारेमा खुला कुरा गर्नु महत्वपूर्ण छ, एडी मोरिसले भने।
यदि तपाईले दुई पटक यौन संभोगको बेला दु: ख भोग्नु भयो भने यो कुनै ठूलो कुरा होइन। यसको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। तर तपाईंको अनुभव राम्रो हुनु आवश्यक छ।
सल्लाह : यदि तपाईंलाई यौन सम्बन्धको दौरान लगातार दुखाइ छ भने, चिकित्सा सल्लाह लिन आवश्यक छ। किनकि पीडा अन्य हुन सक्छ। डाक्टरले दिन सक्ने यो उत्तम सल्लाह हो। एजेन्सी
अंजु पन्तको Cont विवाद: पैसाको लागि खुशी, केटा!
असुरक्षित यौनसम्पर्कले लाग्ने गर्छ गोनोरिया
लकडाउनमा मधुमेहका बिरामीले के गर्ने ?
April 24, 2020 April 24, 2020 mithokhabar